जन्मदिनको अवसरमा टुडु परिवारलाई आर्थिक सहयोग - Nigranitimes
होमपेज / समाचार / जन्मदिनको अवसरमा टुडु परिवारलाई आर्थिक सहयोग
साउन १८ गते, कानेपोखरी । मोरङको कानेपोखरी–६, रमाइलोमा बस्दै आएकी तपस्या अधिकारिले आफ्नो जन्म दिनको अवसर विपन्न वर्गका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
सोमबार गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजमती इङ्नामको उपस्थितमा तपस्याले वडा नं. ३ की सद्दु टुडुलाई नगद १० हजार रुपैया सहयोग गरेको हो । सद्दु टुडुको निर्माणधिन घरको निर्माणमा सहयोग पुगोस भनेर एउटा अवसरमा सहयोग गरेको तपस्याले बताइन ।
यस अघि पनि वडा नं. ४ को मुसहर बस्तीमा लताकपडा र ओड्ने कमल वितरण गरेका थिए । यो सानो उमेरमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्रेरणा भने उनका पिताबाट पाएको तपस्या बताउँछिन । उनका पिता भोला अधिकारी राजनितिककर्मी हुन । एमाले जिल्ला सदस्य समेत रहेका अधिकारी गाउँमा विभिन्न सामाजिक काम गर्दै आएका छन् ।
रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा युवा नेता भोजराज श्रेष्ठ, शिक्षक समाजसेवी हेमचन्द्र भण्डारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।